ၾကားသိရသမွ် – Messi Club
တမူးPDFတပ်ရင်း-၁ ရဲဘော်ဇေယျာလင်းထွဋ်ဦး(ခ)စောက်ချောကြီးသို့အမှတ်တရ မင်းထွက်သွားတာ ခြောက်လပြည့်တော့မယ်တစ်ခါမှလည်း အဆက်သွယ်မလုပ်ဘူးဒါပေမယ့် မနေ့ညက မင်းပြန်လာတယ်။ မင်းက အရင်လိုပဲ မင်းစောက်ကျင့်အတိုင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ဝင်ခွင့်လည်းတောင်းမနေဘူး “သားရီး ငါစောက်ချောကြီး ပြန်လာပြီ”တဲ့ ငါ့မှာသာ တအံ့တဩဖြစ်လို့။ အရင်လိုပါပဲ”ဘာဟင်းရှိလဲ သားရီး””ဘာဟင်းဖြစ်ဖြစ် တီးပြီကွာ”တဲ့မီးဖိုချောင်ထဲဝင်ပြီး ခူးခပ်စားနေလိုက်တာ ပလုပ်ပလောင်းပေါ့ … “မင်း ထမင်းစားသစ္စာ ဆိုဦးလေကွာ” ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း “ငါ စိတ်ထဲကဆိုလိုက်တာ မင်းမကြားလိုက်ဘူးမို့လား”တဲ့ ငါ တကယ်အံ့ဩနေတယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့လည်း မင်းကအရင်လိုပဲ”သားရီး ဆေးလိပ်တစ်လိပ်လောက်”တဲ့ငါသောက်နေကျ ရွှေဥဒေါင်းတစ်လိပ်ထုတ်ပေးတော့ စပ်ဖြီးဖြီး မျက်နှာပေးနဲ့ “အဖြူလေး ဘာလေးမရှိဘူးလားကွာ မင့်ဖက်ကြမ်းကြီးက လက်ကျဲလိုက်တာ”တဲ့ ဒါ မင်းပြောနေကျစကားပဲလေ …. နောက်တော့ မင်းက တဲတိုင်လေးကိုမှီရင်း ငြိမ်နေတယ် … ဆေးပေါ့လိပ်ကို ခပ်မျှင်းမျှင်းလေးရှိုက်ဖွာရင်း အဝေးတစ်နေရာကို ငေးနေတယ် […]
နောက်ဆုံးဆန္ဒအဖြစ် အိပ်ယာထဲမှာလဲရင်း သားဖြစ်သူရဲ့မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကင်ဆာရောဂါသည်မိခင်တစ်ဦး
နောက်ဆုံးဆန္ဒအဖြစ် အိပ်ယာထဲမှာလဲရင်း သားဖြစ်သူရဲ့မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကင်ဆာရောဂါသည်မိခင်တစ်ဦး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာသေဆုံးခြင်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအများစုအတွက် ဦးစားပေးအနေနှင့်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ဘဝသက်တမ်းကုန်ခါနီးလူနာအချို့ဟာ ၎င်းတို့၏သက်တမ်းရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းကို နောက်ဆုံးအကြိမ်တွေ့ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏သားသမီးများဘွဲ့ရတာကို မြင်ချင်ခြင်း ၊ အကြိုက်ဆုံးဘီယာသောက်ခြင်း (သို့) ၎င်းတို့ရဲ့ကျိန်ဆိုထားတဲ့ရန်သူကိုခွင့်လွတ်ပေးဖို့ တွေ့ချင်ခြင်းကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောဆန္ဒများရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၎င်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒပြည့်စုံတာက ၎င်းတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေကိုငြိမ်းချမ်းသွားစေရုံသာမက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၎င်းတို့ရဲ့ဘဝကိုနောက်ဆုံးပိတ်သိမ်းခြင်းတစ်ခုအဖြစ်လည်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာကဲ့သို့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား Ng Yuet Hay အမည်ရှိ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်သူမဟာ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အဆင့် ၄ ပန်ကရိယကင်ဆာရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးနောက် ၎င်းနှင့်လုံးထွေးခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်များက သူမသည် နောက်ထပ်လအနည်းငယ်သာအသက်ရှင်ရန်ကျန်ရှိကြောင်း ပြောတဲ့အခါ သူမ၏စိတ်ထဲတွင် သူ့သား Chia Fu Yong ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတော့မြင်ချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတစ်ခုချက်ချင်းဝင်လာခဲ့ရပါတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် Chia အမည်ရှိသားဖြစ်သူဟာ လာမည့်နှစ်မှ […]
နေအိမ်တွင်အသက်၈နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကို ကိုယ်တိုင်စာသင်ပေးရာမှ သားဖြစ်သူကဘယ်လိုမှနားမလည်လို့ သင်ပေးတဲ့လူသာမောသွားပြီး နှလုံး See more…
ကလေးသူငယ်များကိုပညာသင်ကြားပေးရသောအလုပ်သည်လော ကတွင် စိတ်ပင်ပန်းမှုအပေးနိုင်ဆုံးသောအလုပ်ဟုပြောလျှင်ပင်ငြင် းဆန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကလေးသူငယ်များ၏ညဏ်ရည်ကိုချင့်ချိန်မှန်းဆပြီးသင်ကြားရတာဖြစ်သည့်အတွက်ဦးနှောက်ထဲအရောက်ပို့နိုင်အောင်သင်ကြားရန်မှာ လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ယခုတွင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံမှဖခင်တစ်ဦး၏အဖြစ်သည်ငိုရမလိုရယ်ရမလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ သူ၏၈ နှစ်အရွယ်သားလေးကို ညအချိန်မှစာပြန်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ ဖခင်သင်ပေးသမျှကိုသားဖြစ်သူကနားမလည်သည့်အချိန်မှာတော့ စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများကနှလုံးအမောဖောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဆေးရုံသို့ချက်ချင်းတင်လိုက်ရပြီးအရေးပေါ်ကုသမှုပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ Shoon (Cele Daily) Zawgyi ေနအိမ္တြင္အသက္၈ႏွစ္အ႐ြယ္သားျဖစ္သူကို ကိုယ္တိုင္စာသင္ေပးရာမွ သားျဖစ္သူကဘယ္လိုမွနားမလည္လို႔ သင္ေပးတဲ့လူသာေမာသြားၿပီး ႏွလုံးအေမာေဖာက္ကာ ေဆး႐ုံတင္လိုက္ရသည့္ဖခင္၏အျဖစ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးရေသာ အလုပ္သည္ ေလာကတြင္ စိတ္ပင္ပန္းမႈအေပးႏိုင္ဆုံးေသာအလုပ္ဟုေျပာလွ်င္ပင္ ျငင္းဆန္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ကေလးသူငယ္မ်ား၏ညဏ္ရည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္မွန္းဆၿပီးသင္ၾကားရတာျဖစ္သည့္အတြက္ ဦးေႏွာက္ထဲအေရာက္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားရန္မွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ယခုတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွဖခင္တစ္ဦး၏အျဖစ္သည္ ငိုရမလိုရယ္ရမလိုျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။အေၾကာင္းကေတာ့ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ သူ၏၈ႏွစ္အ႐ြယ္သားေလးကို ညအခ်ိန္မွစာျပန္သင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခါ ဖခင္သင္ေပးသမွ်ကို သားျဖစ္သူက နားမလည္သည့္အခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားက ႏွလုံးအေမာေဖာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသို႔ခ်က္ခ်င္းတင္လိုက္ရၿပီးအေရးေပၚကုသမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ Shoon (Cele Daily)
အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ရင္သားကို ကိုင္ၾကည့္႐ုံနဲ႔ အသက္အတိအက် ေျပာႏိုင္တဲ့ ဆရာႀကီးကိုမွ ပညာစမ္းမိတဲ့ ေဘာစိမမတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျဖစ္
ေဘာစိမမတေယာက္…သူ႔မရဲ႕ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔မွာ အလွျပင္ဆိုင္ကိုသြားၿပီး ….မ်က္ႏွာေပၚကအေရးအေၾကာင္းေတြကို ဖယ္ရွားျပစ္လိုက္တယ္ ပိုက္ဆံေတာ္ေတာ္ကုန္သြားေပမဲ့မွန္ထဲမွာျမင္ေနရတဲ့…သူမရဲ႕ႏုပ်ိဳေနတဲ့မ်က္ႏွာေလးကိုေတြ႕ေတာ့ေက်နပ္ၿပီးၿပဳံးေနတယ္ ႐ုပ္ကႏုပ်ိဳသြားေတာ့…သူမရဲ႕စိတ္ကလည္းလန္းဆန္းတက္ႂကြလာၿပီး…အိမ္ျပန္လမ္တေလွ်ာက္လုံးမွာ… သူမရဲ႕ဟန္ပန္အမူအရာေတြက တကယ့္ကို…ဖ်က္လတ္သြက္လတ္ေနတာပါ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈ႕ျမင့္မားလာျခင္းနဲ႔အတူ…တပါးသူေတြေရာ သူမအေပၚ…ဘယ္လိုျမင္လဲဆိုတာ…သိခ်င္လာတယ္ အာ့နဲ႔..ဖိနပ္ဆိုင္ထဲဝင္သြားၿပီး…ဖိနပ္တရံဝယ္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ…အေရာင္းဝန္ထမ္းေကာင္ေလးကိုေမးလိုက္တယ္ ” ဟိတ္ ! မမတခုေမးရင္ေမာင္ေလးစိတ္မဆိုးဘူးထင္တယ္” ” မမ အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ သိလား ” ” ၃၂ ေလာက္ေတာ့ရွိမယ္ထင္တယ္ မမ ” ” အို ! မဟုတ္ပါဘူးေမာင္ေလးရယ္” ” ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးပါေနာ္ မြမြ ” ဆိုင္ထဲကထြက္လာခ်ိန္မွာေတာ့သူမဟာ ပီတိနဲ႔အတူတိမ္ေတြကိုစီးေမ်ာေနရသလိုပါ ေနာက္ထပ္ KFC ဆိုင္ထဲကိုဝင္လိုက္တယ္ ေကာင္တာကေကာင္မေလးကို သူ႔အသက္ကို…ခန႔္မွန္းခိုင္းျပန္တယ္ ” ၃၀ ေတာ့ရွိမယ္ထင္တယ္ မမ ” ” မဟုတ္ပါဘူး ညီမေလးရယ္ ” ” မမ ဒီေန႔ပဲ အသက္ ၄၅ […]
ထိုင်းချဲထီ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရှယ်ထားပါ….
ထိုင်းချဲထီ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရှယ်ထားပါ…. ထီပေါက် ချဲပေါက်ဂါထာတော် ၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗ္ဗလာဘံ ဘဝိဿတိ။ ထေရဿ အနုဘာဝေန၊ သဗ္ဗေ ဟောန္တု ပိယံ မမ။ ၂။သီဝလိ စ မဟာဝီရော ယေ ယေ ပဿန္တု မံ ပိယံ။ တေ တေ ပဿန္တု ပရမံ၊ ဇနပဒါ ပူဇယန္တု။ ၃။သီဝလိ နာမ ထေရေန၊ မမသီသေ ဌပေတွာန၊ ဇမ္ဗူဒီပ မဏ္ဍလေန၊ ဇယောမန္တာ သုခါဝဟံ။ ၄။သီဝလိ စ မဟာနာမံ၊ ဣန္ဒာဒေဝါ သဗြဟ္မကာ။ မနုဿပုရိသော ဣတ္ထိ၊ မဟာလာဘံ ဘဝိဿတိ။ ၅။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ နာနာဒေဟိ […]
ကြားလို့မှ မကောင်းဗျာ…လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့ သားဖြစ်သူမှ မိခင်ရော ညီမအရင်း ဖြစ်သူတို့ကို Seemore …….
ကြားလို့မှ မကောင်းဗျာ…လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့ သားဖြစ်သူမှ မိခင်ရော ညီမအရင်း ဖြစ်သူတို့ကို……Seemore မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ သရက်တောကျေးရွာတွင်သားအရင်းဖြစ်သူမှမိခင်နှင့်ကိုးတန်းအရွယ်ညီမဖြစ်သူအားအကြိမ်ကြိမ်သားမယားပြုကျင့်သဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူတွင်သားဖြစ်သူ၏ကိုယ်ဝန် ၂လရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ပြစ်မူကျူးလွန်သူ ဇော်မင်းထွန်း(၂၀)နှစ်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ သရက်တောကျေးရွာနေသူဖြစ်ပြီးမိခင်အရင်းဖြစ်သူအားလွန်ခဲ့သော၃လခန့်မှစတင်ကာ အရက်မူးလာတိုင်းဓားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ပြီးသားမယားအဖြစ် ၂ရက်ခြားတစ်ကြိမ်၊ ၃ရက်ခြားတစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူမှရှက်လွန်း၍မည်သူ့မှထုတ်ဖော်မပြောဆိုခဲ့ကြောင်း မသကာ်၍ဆေးခန်းသွားပြစဉ်ကိုယ်ဝန်၂လရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မိမိတွင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသဖြင့် သမီးဖြစ်သူကိုးတန်းကျောင်းသူ မ(………..)အားမေးမြန်းကြည့်ရာ အစ်ကိုဖြစ်သူမှ ညနေကအရက်မူးလာစဉ်အမေမရှိခိုက် ထမင်းချက်နေသော၄င်အားဓားဖြင့်ထောက်ကာမီးဖိုချောင်တွင်သားမယားပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ဘယ်သူ့မှမပြောနှင့်ပြောလျှင်သတ်ပစ်မည်ဟုပြောသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူအားမပြောပြခဲ့ကြောင်းဟုသိရသည်။ မိခင်အရင်းဖြစ်သူနှင့်ကိုးတန်းကျောင်းသူညီမဖြစ်သူအားသားမယာပြုကျင့်သူ ဇော်မင်းထွန်း(၂၀)နှစ်အားမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်(………)မှ အရေးယူပေးပါရန်တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့်ပွင့်ဖြူမြို့မရဲစခန်းကအမူဖွင့်လှစ်စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးတရားခံမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေကြောင်းသိရသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်သရက်တောကျေးရွာနေ ဒေါ်(………)တွင်လွန်ခဲ့သော၂နှစ်ခန့်တွင်ခင်ပွန်းဖြစ်သူဆုံးသွားခဲ့၍အိမ်ထောင်ဆက်မပြုဘဲ သားသမီးနှစ်ဦးဖြင့်နေထိုင်ခဲ့ပြီး တောင်သူအလုပ်ဖြင့်အသက်မွေးကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိတွင်ပြစ်မူကျူးလွန်သူအားတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းကာ အပူတပြင်းလိုက်ရှာနေသဖြင့် သတင်းဌာနများသို့မဖြေဆိုနိုင်သေးကြောင်းတာဂန်ရှိသူတစ်ဦးမှနေ့စဉ်သတင်းသို့ပြောကြားသည်။ #Crd Unicode ကြားလို့မှ မကောင်းဗျာ…လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့ သားဖြစ်သူမှ မိခင်ရော ညီမအရင်း ဖြစ်သူတို့ကို……Seemore မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ သရက်တောကျေးရွာတွင်သားအရင်းဖြစ်သူမှမိခင်နှင့်ကိုးတန်းအရွယ်ညီမဖြစ်သူအားအကြိမ်ကြိမ်သားမယားပြုကျင့်သဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူတွင်သားဖြစ်သူ၏ကိုယ်ဝန် ၂လရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ပြစ်မူကျူးလွန်သူ ဇော်မင်းထွန်း(၂၀)နှစ်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ သရက်တောကျေးရွာနေသူဖြစ်ပြီးမိခင်အရင်းဖြစ်သူအားလွန်ခဲ့သော၃လခန့်မှစတင်ကာ အရက်မူးလာတိုင်းဓားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ပြီးသားမယားအဖြစ် ၂ရက်ခြားတစ်ကြိမ်၊ ၃ရက်ခြားတစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူမှရှက်လွန်း၍မည်သူ့မှထုတ်ဖော်မပြောဆိုခဲ့ကြောင်း မသကာ်၍ဆေးခန်းသွားပြစဉ်ကိုယ်ဝန်၂လရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မိမိတွင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသဖြင့် […]
မြောက်ဒဂုံဘေလီတံတားအနီးတွင် ပ-စ်-ခ-တ် ခံရပြီး သေဆုံး သူမှာ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ ဖြစ်နေ
မြောက်ဒဂုံဘေလီတံတားအနီးတွင် ပ-စ်-ခ-တ် ခံရပြီး သေဆုံး သူမှာ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ ဖြစ်နေ ရန်ကုန်၊မြောက်ဒဂုံဘေလီတံတားအနီးတွင် ယမန်နေ့ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီခွဲအချိန် ပစ်ခတ်ခံရပြီး သေဆုံးသူမှာ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဝင်းမြင့်ဇော် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ညပိုင်း ဗိုလ်ကြီးဟောင်း လည်းဖြစ်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် လျှပ်စစ် မန်နေဂျာလည်းဖြစ်သူ ဝင်းမြင့်ဇော်သည် ကလူဂါ အနက်ရောင် ယာဉ် ဖြင့် ၄၆ လမ်းဆုံဘက်မှ ပင်လုံလမ်းအတိုင်း ဘေလီတံတားဘက်သို့ မောင်းနှင် လာစဉ် သေနတ်ဖြင့် ၆ ချက် ပစ်ခတ်ခံရကြောင်း၊ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဝင်းမြင့်ဇော် ၏ မေးစေ့ယာဘက် ၁ ချက်၊ ဝဲပါးဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ ၁ […]
တစ်မြို့လုံးက အမှိုက်တွေကို လိုက်သိမ်းရသည့် အလုပ်သမားဘဝမှ အသက်၃၂နှစ်အရွယ်မှာဘဲ ဝန်ထမ်းပေါင်းထောင်ကျော်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဋ္ဌေးကြီးဖြစ်လာခဲ့သည့်အမျိုးသား
လူသားတို့သည့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ကြိုးစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူ အချို့လူသားများသည် လောက၏နိမ့်ကျသည်ဟုယူဆထားသော အလုပ်တွေကို အထင်အမြင်သေးခံနေရပြီး လုပ်ကိုင်နေကြရတာတွေရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ အသက်၃၂နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော မစ္စတာCao Ngoc Can ဆိုသည့်အမျိုးသားဟာလည်း Bozhouမြို့တစ်ခုလုံး၏အမှိုက်တွေကို လိုက်လံသိမ်းဆည်းရသည့် အမှိုက်ကောက်သမားလေးဖြစ်ပြီး လူအများ၏ကဲ့ရဲ့မှုတွေကို ခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ ပစ္စည်းအဟောင်းလေးတွေကို ငွေကြေးရရှိအောင်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးကို ပို့ဆောင်ပေးရသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကို ဝန်ထမ်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ဖြင့် တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Zawgyi တစ္ၿမိဳ႕လုံးက အမႈိက္ေတြကို လိုက္သိမ္းရသည့္ အလုပ္သမားဘဝမွ အသက္၃၂ႏွစ္အ႐ြယ္မွာဘဲ ဝန္ထမ္းေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္သူေ႒းႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည့္အမ်ိဳးသား လူသားတို႔သည့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အလုပ္ေတြကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရင္း အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔အတူ အခ်ိဳ႕လူသားမ်ားသည္ ေလာက၏နိမ့္က်သည္ဟုယူဆထားေသာ အလုပ္ေတြကို အထင္အျမင္ေသးခံေနရၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာေတြရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အသက္၃၂ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မစၥတာCao Ngoc Can ဆိုသည့္အမ်ိဳးသားဟာလည္း […]
သမီးအရင်းဖြစ်သူအား ဖခင်မှ ယောက်ဖနှင့်တကွ ညစဉ်နီးပါး (*****)လုပ်ပြီး အခြားသူများထံမှလည်း ငွေယူကာ See more…….
Zawgyi သမီးအရင်းဖြစ်သူအား ဖခင်မှ ယောက်ဖနှင့်တကွ ညစဉ်နီးပါး (*****)လုပ်ပြီး အခြားသူများထံမှလည်း ငွေယူကာ… See more မုံရွာမြို့ အလုံရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော သိန်းလွ င်(အသက် ၄၀နှစ်)သည် အသက် (၁၂)နှစ်အရွ ယ်ရှိ မိမိ၏ သမီးအရင်းဖြစ်သူအား ညစဉ်နီးပါး မု ဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပြီး ယောက်ဖနှင့်တကွ အခြားသူများထံမှလည်း ငွေယူကာ သမီးအရင်းဖြစ်သူအား ကာမဆက်ခံခိုင်းသည့် သက်ငယ်မုဒိမ်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ မုံရွာခရိုင်တရားရုံးတွင် ရုံးတင် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ဖြစ်စဉ်မှာ အလုံရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ပြီး ကျပန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သူ သိန်းလွင်သည် ပထမဇနီး ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်နှင့် သမီးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါသိန်းလွင်သည် မယားငယ်ယူပြီး မယားငယ်ကိုပါ အိမ်ပေါ်အထိ တင်ထားကာ ပေါင်းသင်းနေခဲ့သည်။ အိမ်တွင် မယားကြီးဖြစ်သူနှင့် သမီးတစ်ယောက်၊သားတစ်ယောက်နှင့်အတူ မယားငယ်ဖြစ်သူနှင့် မယားငယ်မှ […]
လည်ပင်းအကျိတ် ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ကြောင်း စိ တ်ပူနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို သတင်းကောင်းလေး ပြောလာတဲ့ အကယ်ဒမီ ချိုပြုံး …… See More
လည်ပင်းအကျိတ် ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ကြောင်း စိတ်ပူနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို သတင်းကောင်းလေး ပြောလာတဲ့ အကယ်ဒမီ ချိုပြုံး ပရိသတ်ကြီးရေဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ ချိုပြုံးကတော့ လည်ပင်းမှာ အကျိတ်ရှိနေတာကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသဖို့ ထိုင်းနို င်ငံ ဘန်ကောက်မြို့က ဆေးရုံကြီးကို ရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အန်တီချိုပြုံးရဲ့လည်ပင်းအကျိတ်ကို အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မိသားစုဝင်တဦးထံမှသိရှိရပါတယ်။သမီးဖြစ်သူမိုးမိုးသည်လည်းမိခင်ဖြစ်သူအားအနီးကပ်ပြုစု​စောင့်​ရရှေ ာက်လျက်ရှိကြောင်းသားဖြစ်သူကိုတိုးမြင့်​ဆွေထံမှသိရှိရပါတယ်။ အ​မေ့အနားမှာအမရှိပါတယ်ဟုဆိုပါတယ်။သမီးဖြစ်သူမမိုးမိုးကလည်းမိခင်ဖြစ်သူသတိရလာပြီဖြစ်​ကြောင်းအတည်ပြု​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အန်တီချိုပြုံး၏ကျန်းမာ​ရေးအတွက်အနပညာ​လေ ာကသားများ၊ပရိတ်သတ်များကလည်းဆု​တောင်း​​ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ Zawgyi version လည်ပင်းအကျိတ် ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ကြောင်း စိ တ်ပူနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို သတင်းကောင်းလေး ပြောလာတဲ့ အကယ်ဒမီ ချိုပြုံး ပရိသတ်ကြီးရေဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ ချိုပြုံးကတော့ လည်ပင်းမှာ အကျိတ်ရှိနေတာကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသဖို့ ထိုင်းနိုင် ငံ ဘန်ကောက်မြို့က ဆေးရုံကြီးကို ရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အန်တီချိုပြုံးရဲ့လည်ပင်းအကျိတ်ကို အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မိသားစုဝင်တဦးထံမှသိရှိရပါတယ်။သမီးဖြစ်သူမိုးမိုးသည်လည်းမိခင်ဖြစ်သူအားအနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရရှော က်လျက်ရှိကြောင်းသားဖြစ်သူကိုတိုးမြင့်ဆွေထံမှသိရှိရပါတယ်။ အမေ့အနားမှာအမရှိပါတယ်ဟုဆိုပါတယ်။သမီးဖြစ်သူမမိုးမိုးကလည်းမိခင်ဖြစ်သူသတိရလာပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အန်တီချိုပြုံး၏ကျန်းမာရေးအတွက်အနပညာလော […]